KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Dr Xaawo Cabdi iyo Gabdhaheeda oo loo aqoonsaday Haweenka Sanadka
Saturday 6 November 2010 08:52
New York (Keydmedia) - Dr Xaawo Cabdi iyo labadeeda Gabdhood ayaa loo aqoonsaday Haweenka Sanadkan 2010 (Women of the Year) kadib qiimeyn ay sameysay majalad ka soo baxday Dalka Maraykanka oo lagu magacaabo Glamour.
Sababta loo xushay Seddexdan Shaqsi ee isku qoyska ah ayaa la sheegay in tahay kaalmada aadaminimo ee ay ka hayeen mudadii barakaca isbitaalka Xaawa Cabdi loogu magac daray ee duleedka Muqdisho kaasoo kaalma wanaagsan u fidin jiray Haweenka iyo Caruurta.
Dr Xaawo waa 63 sano waxaana Gabdhaheeda lagu kala magacaabaa Dr Deeqa Max’ed iyo Dr Aamina Max’ed .
Hadal qoraal ah oo majalada lagu daabacay ayaa lagu yiri “ waxa ay majalada si weyn ugu faraxsantahay in ay aqoonsato Dr Xawo iyo Gabadhaheeda isla markaana ay ku magacawdo Haweenka sanadka ee majaladda Glamour.
Xera ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah oo ay maamusho Xaawo Cabdi ayaa la sheegay in dadka ku nool ay tiradooda tahay 90-kun oo ruux una badan Haween iyo caruur qaarkood ay aabe la’aan yihiin.
Bishii May ee sanadkan ayaa koox ka tirsan Xisbiga Xasan Daahir waxa ay xoog ku galeen isbitaalki Xaawo Cabdi ee ay Dr-sada maamuleysay waxaana ay jirdileen Dr-sada iyagoona mudda badan hakad galiyay howshii isbitaalka.
Kadib markii ay hanadaad kala kulantay Xaawo Cabdi kooxda Xasan Daahir ayeey ka baxday Dalka waxaana taasi ay soo dadajisay in MSF oo kaalmeyn jirtay goobta Caafimaad ee xaawo maamusho ay hakiso taageeradeedii
Magacaabista ay majaladan ku magacawday Xaawo Cabdi iyo Gabdhaheeda Haweenka Sanadka ayaa waxa ay dhiira galin u noqon kartaa soomaali badan oo aaminsan in Qatarta dalka ka jirta darteed aan la fulin Karin howl samafal.